Ny zava-miafina momba ny marketing nomerika | Martech Zone
Ny zava-miafina momba ny marketing nomerika
Talata, Septambra 10, 2013 Alarobia, Septambra 11, 2013 Douglas Karr
Ity infographic avy amin'ny Hostgator ity dia mipoitra manodidina ny dokam-barotra sy ny fampiroboroboana, ny fitaovana ary ny hetsika marketing dizitaly. SEO dia paikady, saingy tsy tetika ny Analytics - fitaovana hanampiana amin'ny famaritana ny tetika. Ny marketing ara-bola dia ampahany amin'ny paikady ankapobeny fa tsy paikady ho azy irery. Ary ny fiovam-po dia tsy paikady fa vokatry ny paikady. Karazana hafahafa ny fomba nanambaran'izy ireo azy, saingy misy fitaovana, tidbits ary statistika sasany manome lanja.
Hostgator: ny marketing amin'ny zavatra mety amin'ny sehatra nomerika dia mety ho toa saro-pantarina sy mistery. Misy làlana marobe izay tsy maintsy arahana sy refesina miaraka mba ho azo antoka fa manao asa tsara indrindra ianao ary mahazo ny be indrindra amin'ny volanao.
Tsy mino aho fa saro-pantarina na mistery ny marketing amin'ny sehatra nomerika. Tsy mbola nanana toy izany karazana fitaovana eo am-pelatanantsika handraisana fanapahan-kevitra hendry isika. Ary tsy misy resaka momba ny marketing amin'ny finday, paikadin'ny horonantsary ary marketing amin'ny mailaka - heveriko fa tsy nahatratra ilay marika ity sary ity.
Tags: AnalyticsContent Marketingfiovam-pohostgatorSEO
Lahatsary: ​​Famonoana sosialy mifanohitra amin'ny fikarohana
Maninona no mampiasa atiny hita maso amin'ny haino aman-jery sosialy?